Maliishiyada Macawisleyda oo sheegay in ay shabeelaha hoose ku dileen afar al-Shabaab ah - Halbeeg News
Maliishiyada Macawisleyda oo sheegay in ay shabeelaha hoose ku dileen afar al-Shabaab ah
qaar ka tirsan maleeshiyada Macawisley xuquuqda sawirka: online
MUQDISHO(HALBEEG)-Maleeshiyada la magac baxday Macawisley ee al-Shabaab kula dafaallanta gobolka Shabellaha hoose ayaa sheegtay in ay dileen afar dagaalayahan oo ka tirsan al-Shabaab, kaddib markii ay shalay galinkii dambe kula dirireen deegaanka Yaaq Bari-weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Afarta dagaalyahan ee laga dilay Shabaab ayaa waxaa ka mid ah sarkaal lagu sheegay magaciisa Gargaduud oo qaabilsanaa uruurinta xoolaha baadda ah ee al-Shabaab ugu yeerto sakawaatka, sida uu xaqiijiyay hoggaamiye u hadlay kooxda macawileey, Cumar Sheekh Maxamed oo u warramay warbaahinta.
Wararka ayaa sheegaya in saaka maydadka afarta nin loo soo tallaabiyay magaalada Wanlaweyn ee isla gobolkaas.
Afhayeenka ayaa sheegay in kooxda Shabaab oo aad u hubaysan ay weerar kusoo qaadeen deegaanka Yaaq Bari-weyne oo 10 km u jirta Wanlaweyn iyadoo ay iska caabbiyeen dadka deegaanku
“Shabaab iyo dadka deegaanka ayuu iska hor imaadkani u dhexeeyay saacado badan ayuuna qaatay dagaalka,” ayuu sheegay Cumar oo intaa ku daray “Afar dagaalyahan ayaan ka dilnay intii kalena weey baqa carareen.”
Shabaab ayaa la sheegay in dadka deegaanka Yaqa Bari-weyne iyo tuulooyin badan oo ku hareereysan ay ka uruurin jireen lacago baad ah taasoo ugu dambayn dadka deegaanku ay ka biyo diideen.
Al-shabaab wali wax war ah kama aysan soo saarin guusha ay sheegteen dadka reer Yaaq Bari-weyne.
Dowladda Soomaliya oo kaashaneysa ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ayaa inta badan al-Shabaab ka saartay magaalooyinka waaweyn ee Koonfurta Soomaliya.
Baroordiiqda dadkii ku le’day diyaarddii burburtay ee Itoobiya oo maanta ka dhacaysa Nayroobi iyo Addis Ababa